निद्रा त लाग्छ नै- विचार - कान्तिपुर समाचार
चैत्र ५, २०७५ डा. अजय रिसाल
काठमाडौँ — ‘डाक्टर सा’ब, मलाई निद्रा लाग्ने औषधि चाहिं नदिनुस् है  ! बरु काउन्सेलिङ मात्र गर्नुस् । तपाईंले जति चोटि बोलाए पनि आउँछु ।’‘औषधि त के नै हुन्छ र यस्तो रोगको ? डाक्टरहरूले त खालि निद्रा लाग्ने औषधि दिएर बिरामीहरूलाई लठ्याउने मात्र न हुन् !’‘त्यो निद्रा लाग्ने औषधि धेरै खानु हुँदैन है  ! त्यसले बानी लगाउँछ, पछि छुटाउनै सकिन्न !’
उपर्युक्त तीन सन्दर्भ मानसिक रोग उपचारको गम्भीरतालाई लिएर उत्पन्न हुने सन्देहका केही उदाहरण हुन् । यिनले मनोचिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिकतामाथि तीन वटै महŒवपूर्ण विषयतिर औंल्याएका छन् :
१. मानसिक समस्याहरूमा डाक्टरी औषधि नै हुँदैन । २. मनोचिकित्सकहरूले खालि निद्रा लाग्ने औषधि दिएर मनोरोगीहरूलाई लठ्याउने र तिनका अप्ठ्यारा व्यवहारलाई निस्तेज मात्र गराउने हुन् । ३. निद्रा लाग्ने औषधिहरूले बानी लगाउँछन्, अनि त्यसबाट मानसिक रोगीहरूले जीवनैभर छुटकारा पाउन सक्दैनन् । यसरी नै मनोचिकित्सकहरू मनोरोगीलाई दुहुनो गाई बनाउने गर्छन् ।
पत्रपत्रिका र संचार माध्यममा आएका, सामाजिक जमघटमा हुने गरेका अनि अलिकति जान्नेबुझ्ने कहलिएकाहरूको कुराकानी र भनाइलाई संश्लेषण गर्दा हाम्रो समाजमा यी भ्रमहरूले नराम्ररी नै जरो गाडेको मैले अनुभूति गरेको छु । यस्ता भ्रमहरू व्याप्त रहिरहनुमा एउटा मनोचिकित्सकका नाताले आफूलाई पनि जिम्मेवार नै ठान्ने गरेको छु ।
एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा मनोचिकित्साको क्षेत्रमा ठूलो प्रगति भइसकेको छ । सोह्रौं–सत्रौं शताब्दीमा जस्तो ‘टाउकामा प्वाल पार्ने,’ ‘बोक्सी धपाउने,’ ‘आगो लगाउने’ जस्ता विधिहरू अहिलेको सभ्य समाजमा अपनाइन्नन् । न अठारौं–उन्नाइसौं शताब्दीमा झैं मानसिक रोगीहरूलाई बा“धेर, थुनेर, यातना दिएर पाशविक स्तरमै राख्ने गरिन्छ, न त बीसौं शताब्दीमा झैं बिरामीहरूले देख्ने सपनाका आधारमा, उनीहरूसँग एक्लै गरिएका कुराकानीका माध्यमद्वारा या जे कुरामा पनि यौनिक विश्लेषण मात्र गरेर उपचार गर्ने प्रयास नै गरिन्छ अचेल । समय धेरै परिवर्तन भइसकेको छ ।
त्यसैले त बीसौं शताब्दीको ‘हिस्टेरिया’ लाई ‘डिसोसिएसन’ भनिन्छ अचेल । साइकोसिस र न्युरोसिसदेखि पर अचेल अनेक मानसिक रोग छलफलमा आइसकेका छन् । आनुवंशिकता, रासायनिक तत्वहरू (न्युरोट्रान्समिटर, हर्मोन, खनिज पदार्थ) अनि मस्तिष्कको अध्ययन (सिटी स्क्यान, एमआरआई) बाट प्रायः सबै मानसिक रोगका जैविक कारकतत्वको आकलन भई नै सकेको छ । अनि तिनै अध्ययनका आधारमा सन् १९५० यता थुप्रै औषधि ब्निसकेका छन् ।
अब भनौं, त्यसै मुताबिक गरिने उपचार वैज्ञानिक नहोला त ? ‘मानसिक रोगहरूको डाक्टरी औषधि छ“दै छैन’ भन्ने भ्रम पालिरहनुमा चेतनाको कमी, अध्ययनको सीमितता अनि तार्किक विश्लेषणको अभाव नै कारक रहेको मान्न सकिन्छ । पहिले जस्तो मनोचिकित्सा अध्ययन गरी यही क्षेत्रमा लाग्न हिचकिचाउने डाक्टरहरू ज्यादै कम भएकाले यस्तो भ्रम निवारण गर्न का लागि सबै मनोचिकित्सकहरू एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।
अब कुरा गरौं ‘निद्रा’ को । हाम्रो दैनिक जीवनमा यसको महत्वबारे धेरै भनिरहनु नपर्ला । हाम्रो मस्तिष्कलाई कम्प्यूटरस“ग तुलना गर्ने हो भने त्यसको सफ्टवेयरलाई चुस्त–दुरुस्त राख्न चाहिन्छ निद्रा । शारीरिक मात्र नभई मानसिक थकानबाट मुक्तिका लागि पनि चाहिन्छ निद्रा । त्यस्तै, कोष एवं तन्तुहरूको वृद्धि–विकास अनि स्मरणशक्ति एवं वैचारिक संश्लेषण सबैका लागि चाहिन्छ निद्रा । त्यसैले नै पनि होला, हाम्रो संस्कृतिमा ‘या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता...’ भनेर निद्राकी देवी योगमायाको आराधना गर्ने परम्परा छ । त्यस्तै, ग्रीक सभ्यतामा पनि ‘हिप्नोस’ भनेर निद्राकी देवीलाई मान्ने गरेको पाइन्छ ।
अब जाऔं मानसिक रोगका लक्षणहरूतर्फ । ‘निद्रामा कमी’ प्रायः मानसिक रोगको लक्षण हो । तनाव अनि उदासीनता, एंग्जाइटी या डिप्रेसनका कारण निद्रा लाग्दै नलाग्ने, रातको बीचमा ब्युँझिएपछि निद्रा पर्दै नपर्ने या अरू समयमा भन्दा निद्रा चा“डै खुल्ने हुन सक्छ । त्यस्तै, म्यानिया या हाइपोम्यानिया जस्ता रोगमा बिरामीहरूको उत्साहमा वृद्धि अनि विचारमा आउने तीव्र प्रवाहका कारण बिरामीहरूलाई निद्राको आवश्यकता नै महसुस नहुने हुन सक्छ । सोमाटोफर्म जस्ता रोगहरूमा भने दुखाइका कारण निदाउन नसक्ने हुन सक्छ । हेरिल्याउ“दा निद्राको गडबडीको उपचार नगरी कुनै पनि मानसिक रोगको उपचारै नहुने रहेछ ।
त्यसैले, मानसिक रोगहरूको लक्षणात्मक उपचार पनि निद्राको उपचारबाटै शुरु हुन्छ । हामीले प्रयोग गर्ने एण्टिडिप्रेसेण्ट अनि मुड
स्ट्याबिलाइजर औषधिहरूले तिनको मुख्य काम क्रमशः डिप्रेसन र म्यानियाको उपचारका क्रममा निद्राको सन्तुलन पनि मिलाइरहेका हुन्छन् । अनि सेडेटिभ–हिप्नोटिक औषधिहरू प्रमुखतः निद्रामा हुने गडबडी अनि एंग्जाइटी रोगका लागि नै हुन् ।
अझ मद्यपानजन्य समस्याको प्रारम्भिक चरणमा त यी सेडेटिभ–हिप्नोटिक औषधि नभई हुन्न । मनोचिकित्सकहरूले दिने सबै औषधि ‘निद्रा लाग्ने औषधि’ होइनन्, अनि मानसिक रोगीहरूलाईलठ्याउने मात्र तिनको उद्देश्य कदापि हुँदैन भन्नेमा सबै जना स्पष्ट हुनुपर्छ । हो, तिनले दिने औषधिले अलिकति निद्रा लगाउने काम भने गर्छन्, तर त्यो पनि मनोरोगहरूको उपचारको प्रक्रिया नै हो ।
अब भ्रमबारे केही कुरा । सेडेटिभ–हिप्नोटिक समूहका औषधिहरूले भने बानी लगाउन पनि सक्छन्, यदि चिकित्सकीय निगरानी एवं सरसल्लाह मुताबिक प्रयोग गरिएका छैनन् भने । चिकित्सकहरूको सल्लाहबेगर औषधि पसलमा ‘ओभर द काउण्टर’ यस्ता औषधि प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू लागूपदार्थ दुव्र्यसनी पनि हुन सक्छन् । हामी चिकित्सकहरूले भने त्यस्ता औषधिहरू निश्चित समयका लागि अनि बिरामीका प्रकार हेरेर मात्र प्रयोग गर्ने गर्छौं ।
बिरामीको अवस्था ठीक हुँदै जाँदा त्यस्ता औषधिको मात्रा घटाउँदै जान्छौं अनि बिरामीको अवस्था राम्रो भएपछि त्यस्ता औषधि बन्द नै पनि गरिदिन्छौं । यस्ता कुरा बिरामी एवं बिरामी पक्षलाई राम्ररी बुझाउन सके यी भ्रम पनि हट्नेमा द्विविधा रहन्न । मनोचिकित्सक साथीहरू  ! बिरामी पक्षलाई रोग एवं उपचार विधिबारे सल्लाह–सुझाव दिनमा कन्जुस्याइ“ कदापि नगरौं । यस्ता भ्रमहरूले हाम्रो पेशा एवं हाम्रो उपचार सेवा कार्यको अवमूल्यन मात्र गराउ“छन् ।
यी त भए जनमानसमा व्याप्त भ्रमहरू ! यस्तै भ्रमको पछि लागेर सरकारी तवरबाटै समेत नकारात्मक कार्यहरू भएका छन् । बिनाअध्ययन केही सेडेटिभ–हिप्नोटिक औषधिहरूलाई लागू पदार्थको कोटिमा राखेर तिनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएकाले हामीलाई समेत अहिले उपचार प्रक्रियामा हात बा“धिएको अनुभव भइरहेछ । प्रभावकारी नियमनको साटो नियन्त्रण मात्र भइदिंदा कसरी उपचार कार्य हुन सक्ला ?
लेखक धुलिखेल अस्पतालकामानसिक रोग विशेषज्ञ हुन् ।
प्रकाशित : चैत्र ५, २०७५ ०९:३०
१०० वर्ष पुरानो पुलकै भर
चैत्र ५, २०७५ भीमबहादुर सिंह
जाजरकोट — नदी/खोलामा धमाधम झोलुंगे पुल निर्माण भइरहेका छन् । तुइन विस्थापन गर्ने र पुल निर्माण गर्ने कार्यले तीव्रता पाएको छ । केही वर्षयता निर्माण भएका पुल ४/५ वर्षमै मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् । तर, जाजरकोटको भेरी नदीस्थित मटेला पुलमा भने बटुवाले सय वर्षदेखि वारपार गरिरहेका छन् ।
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका पालामा बनेको जाजरकोटस्थित भेरी नदीको मटेला पुल । तस्बिर : भीमबहादुर/कान्तिपुर
भेरी नगरपालिका ११, मटेला र पश्चिम रुकुमको चौरजहारी जोड्ने पुल विकासको उत्कृष्ट नमुना पनि बनेको छ । पुरै फलामले बनेको पुलका सामग्रीमा खियासमेत लागेका छैनन् । पुलका पिलर तथा लठ्ठा पनि दुरुस्तै रहेको प्राविधिकको भनाइ छ ।
अहिलेसम्म पुलमा अन्य कुनै क्षति भएको छैन । पुल राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले १९८२ सालमा निर्माण गरेका थिए । भेरी नदीको मटेला पुल नेपालमा विकास योजनाको उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा हरेको भेरी नगरपालिका ३, पीपलडाँडाका ७४ वर्षीय केशवजंग शाह बताउँछन् । तत्कालीन जाजरकोटी राजाकी छोरी बालकुमारी शाहको सक्रियतामा पुल निर्माण भएको थियो ।
बालकुमारी चन्द्रशमशेरकी कान्छी रानी थिइन् । बालकुमारीले जाजरकोटको खलंगामा बसोबास गर्ने आफ्ना माइतीलाई भेरी नदी वारपार गर्न असुविधा हुँदा पुल निर्माणका लागि आग्रह गरेपछि चन्द्रशमशेरले मटेलामा झोलुंगे पुल बनाइदिएको शाहले बताए । पुल बन्नुअघि यहाँका बासिन्दालाई रुकुम, सल्यान, सुर्खेतलगायत ठाउँमा आवतजावत गर्न डुंगाको सहायताले भेरी नदी वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
भेरी नदी डुंगा तथा पौडी खेलेर वारपार गर्ने क्रममा पटकपटक स्थानीयको ज्यान जाने गरेको घटनाप्रति बालकुमारी चिन्तित भएर चन्द्रशमशेरलाई पुल निर्माण गर्न बाध्य पारेको उनको भनाइ छ । ‘चन्द्रशमशेरले पुल निर्माणमा केही समय बेवास्ता गर्दा बालकुमारीले दरबारमा खानासमेत नखाएरै बसेको सुन्नमा आएको थियो, निकै प्यारी पत्नी भएकाले पनि बालकुमारीको आग्रहलाई स्विकारेर पुल निर्माण गराएको किंवदन्ती छ,’ शाहले भने, ‘मटेला पुल निर्माण भएपछि जाजरकोटवासीलाई रुकुम, सल्यानलगायत ठाउँमा आवतजावत गर्न सहज भएको थियो ।’
पुल निर्माणका लागि स्कटल्यान्डको एवरडिनस्थित जोन एम हेन्डरसन एन्ड कोअपरेसन लिमिटेड कम्पनीले सम्पूर्ण सामग्री उत्पादन तथा जडान गरेको थियो । पुल निर्माणमा के कति लागत खर्च भएको थियो भन्ने यकिन विवरण थाहा नभएको इन्जिनियर नीरज शाहले बताए । पुलको डिजाइनिङ नेपालका प्रथम इन्जिनियर कुमारनरसिंहराणाले गरेको उनले जनाए । ९० मिटर लम्बाइको पुल नेपालकै पहिलो झोलुंगे पुल भएको शाहको दाबी छ ।
पुलका सामग्री २० हात्ती र स्थानीयले निर्माणस्थलमा पुर्‍याएको स्थानीय अगुवाको भनाइ छ । नेपालगन्जदेखि दुई महिना लगाएर पुलका सामग्री भेरी किनारा हुँदै मटेला पुगेको थियो । स्थानीयले पुलका सामग्री ढुवानी गर्दा खाना खर्चबाहेक अन्य रकम पाएका थिएनन् । मटेला पुलमा दैनिक सयौं सर्वसाधारण आवातजावत गर्छन् । देशकै सबैभन्दा पुरानो र गुणस्तरीय मटेला पुल पुरातात्त्विक सम्पदाको रूपमा दर्ता गरेर ऐतिहासिक महत्त्वलाई जोगाउनुपर्ने शाहको भनाइ छ ।
केही समययता पुलका प्लेट र जाली जीर्ण बन्न थालेको जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख ज्ञानीप्रसाद शर्माले बताए । इतिहास र विकासको उत्कृष्ट नमुना झल्काउने यो पुल पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण भएको उनले जनाए । ऐतिहासिक पुलको मर्मतसम्भार तथा सुरक्षामा सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी भएको उनी बताउँछन् ।
प्रकाशित : चैत्र ५, २०७५ ०९:२३